Mayelana NATHI - SHENZHOU CITY YAAO PUMP INDUSTRY CO., LTD.
I-Shenzhou Yaao Pump Industry Co, Ltd. ingumkhiqizi osezingeni eliphezulu wezingxenye zokupompa zodaka, izingxenye zepompo ezimanzi kanye ne-hydrocyclone linings, ehlanganisa i-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa. Ineminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni sokukhiqiza. Sizibophezele ekuhlinzekeni ukumelana nokugqoka okuphezulu nemikhiqizo yenjoloba esezingeni eliphakeme yabasebenzisi bomhlaba jikelele.
Izingxenye zenjoloba yempompo yenkampani yethu ingashintshana ngokuphelele nezingxenye zenjoloba yempuphu edumile yomhlaba.
Irabha yemvelo (ingeniswe ivela eMalaysia, eSingapore naseThafiand), R26, R33, R08, S01 (EPDM), S10 (NBR), S12 (Nitrile), S21 (Bromobutyl), S31 (Hypalon), S42 (Neoprene).
Igalari yezithombe have Sinesitoko esanele sezingxenye zokungcebeleka）
Ikhwalithi ephezulu yenjoloba
Singuzakwethu othembekile wezixazululo ezinokwethenjelwa, ezigxile emiphumeleni. Umsebenzi wethu ukukhulisa kakhulu ukusebenza kwakho kahle nokusebenza kahle kwezindleko. Izinsizakalo zethu zingasiza amakhasimende ukuthi anciphise izindleko zawo zokusebenza, ahlele ukunakekelwa futhi anciphise isikhathi sokuphumula.Ngokumelana nokugqoka, sisesimweni esiphambili. Ukubambisana kwethu namakhasimende kuyasondela futhi kukude, futhi sizibophezele ekuhlinzekeni izinsizakalo ezengeziwe ekwenzeni ngcono ukusebenza nenzuzo.
I-YAAO ilwela ukuba ngumholi ongenakuphikiswa kuzo zonke izimboni esizisebenzisayo.Sifuna ukuqashelwa emhlabeni jikelele ngekhwalithi evelele yemikhiqizo nezinsizakalo zethu, indlela yethu yokuqamba izinto ezintsha nokuzibophezela kwethu kuzisombululo eziqhubekayo. Isu lethu lokukhula lakhiwe ngokusebenza kahle, ubuholi bemikhiqizo nobunjiniyela kanye nokwenziwa kwamakhasimende okuhlukile.
Ngeminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho komkhakha nolwazi lokusebenzisa ngaphansi kwemikhiqizo yethu, ochwepheshe bethu basebenza nekhasimende ngalinye ukuthola ikhambi elingcono kakhulu. Sihlela ubuchwepheshe bethu ukuhlangabezana nezidingo zakho futhi siqinisekise ukuthi izidingo zakho zensizakalo zisekelwa ukusebenza okuphezulu nokusebenza okungenazinkinga.